लाल कुमाल - नेपाल
लाल कुमालका लेखहरु
पड्किने बादल !
बहालवाला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ‘महान् जनयुद्ध’ कै ह्याङओभरमा छन् क्यारे ! कहिले भन्छन्– एयरपोर्ट तस्करको स्वर्ग हो, अपराधीको सेल्टर हो । कहिले फलाक्छन्– मुलुकमा माफियाको राज छ । अहिले भनेछन्– यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
लाल कुमाल, श्रावण १, २०७५
फुट–बलबाट रक्षा गर !
रातभरि सुत्दैन सहर । गोल अनि चिच्याहट । जर्सी लगाएको छ, हूल बााधेको छ, नाराबाजी गरेको छ । चियापसल गयो, विश्वकप । स्कुल–कलेज गयो, विश्वकप । अफिसमा विश्वकप । बसमा विश्वकप ।
लाल कुमाल, असार २५, २०७५
सियो बनिसक्यो ?
नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने थेगो थोत्रो भइसकेछ । उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यस्तो ‘एक्सक्लुसिभ’ खबर दिए संसद्मा । कमसेकम सियो त बनेछ । सियो बनाएर देखाएछ नेपालले । नयाँ नेपालका लागि गरेको सारा संघर्ष साँच्चै सार्थक भएछ ।
लाल कुमाल, असार १९, २०७५
हिरोको खोजीमा भौँतारिइरहन्छन्, नेपाली । भनेजस्तो नभेटिए ‘भिलेन’लाई नै हिरोको कोटिमा राख्न कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । उदाहरण पूर्वयुवराज पारस शाह नै छँदैछन् ।
लाल कुमाल, असार १२, २०७५
जसरी फेसबुकमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका अल्लारे समर्थक भेटिन्छन्, लाल कुमाल त्यस्तै डाइहार्ट फ्यान हो, शेरबहादुर देउवाको । भलै यसबारे देउवाजीलाई मट्ठै जानकारी छैन । किनभने, ऊ अर्जेन्टिना या ब्राजिलजस्तो देउवा–छाप गन्जी लगाएर फोटो टाास्ने फेसबुके होइन ।
लाल कुमाल, असार ६, २०७५
सााच्चै भनुा भने नेकपा ‘सुधारिएको कम्युनिस्ट पार्टी’ हो । किनभने, यसमा कुनै एबीसीडी–पुच्छर जोडिएको छैन । पुच्छर काटिएकाले नै आज शक्तिशाली र विशाल पार्टी बन्न सकेको हो ।
लाल कुमाल, जेष्ठ २३, २०७५